एक कम्युनिस्ट योद्धाको नजरमा दसैँ – Nepali news portal
मोहन वैद्यको प्रश्न– राम वा देवीकै महिमामा किन, सहिदको महिमामा दसैँ मनाए हुन्न ?
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १४:४३ October 26, 2020 काठमाडौं डेष्क
काठमाडौं, फणिन्द्र नेपाल / रातोपाटी ।
तडकभडक र सुख–सुविधाबाट टाढा सादगीपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका वैद्य कम्युनिस्ट भएकै कारण धर्मप्रति खासै रुची राख्दैनन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरु यतिबेला दसैँ मनाइरहेका छन् । तर उनलाई दसैँको खासै महत्त्व लाग्दैन ।
भौतिकवाद मान्नेहरुका लागि दसैँ मनाउने कुरा आफ्नो इच्छामा भरपर्ने विषयमात्र हो त ? उनी भन्छन्, ‘इच्छामात्रै नभनौँ । यो दसैँ लगायतका चाडबाड जे–जे छन्, यी सबै पुरानो मान्यतामा आधारित छन् । जसले एकातिर यहाँको सामन्तवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ भने अर्कोतिर जनताको जीवनमा गहिरिएर जोडिदिएको पनि छ ।’ यिनै दुई पक्षलाई केलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।